Kuisa shanduro nyowani dzeMacOS pane Mac kunofanirwa kuve chiitiko chakapusa. Iyo Mac inokuudza iwe kuti pane yekuvandudza inowanika kuburikidza nepop up in Notification Center - mune zvimwe zviitiko (zvinoenderana nezvirongwa zvako) yakatomboitora kare uye inongoda yako yekuenda-mberi kuisa. Nekudaro, dzimwe nguva kana iwe ukadzvanya Enda pane yekuvandudza zvinhu enda zvishoma peya-yakaumbwa Muchidzidzo ichi isu tichatarisa zvekuita kana yako Mac matanda kana chando mukati meinoshanda system software yekuvandudza, kana kana iwe ukaona mhosho meseji inoratidza kuti pane dambudziko.
Izvi zvinonyanya kukosha izvozvi ne macOS Huru Sur kusvika paMacs uye vanhu vazhinji vachisangana nematambudziko kurodha pasi nekumisikidza. Isu tinotarisa pane zvekuita kana iwe usingakwanise kurodha macOS Big Sur, inogadziridza apo macOS Big Sur isinga gadzi, uye zvaunofanira kuita kana Mac yako ikagwamba iri pakati peyekuvandudza.
' Kana kana wakwanisa kurodha pasi Big Sur iwe wasangana neshoko: "Hakuna yakakwana nzvimbo yemahara pane yakasarudzwa vhoriyamu kukwidziridza iyo OS!", Isu tiri pano kuzobatsira.
Tichatsanangurawo zvekuita kana iwe ukaona anotevera mameseji: 'macOS haigone kuiswa pakombuta yako', 'gateway yakatemwa nguva' kana 'yakaipa gedhi', uye 'Iyo network yekubatanidza yakarasika' pazasi.
Uye, kana iwe ukatarisana neshoko rinoti: "Iyo yekuvandudza package yakabviswa kubvira payakatorwa kubva kuApple Software Gadziriso server" isu tichagadzirisa izvo futi.
Read yedu Big Sur ongororo.
Nei macOS Big Sur isingatore?
Pane zvikonzero zvishoma nei macOS kurodha pasi kana kuisa maitiro kungasashande kana kukanganiswa. Panewo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti kurodha pasi kungave kuri kutora nguva yakareba. Tichamhanya kuburikidza nematambudziko akasiyana siyana aungangosangana nawo uye akanakisa ekugadzirisa avo pazasi.
Dambudziko: Kurodha pasi kunotora nguva yakareba
Kana zvikaitika kuva vhezheni itsva yeMac inoshanda sisitimu uye urikuyedza kurodhaunira uchangoburitswa panogona kuve nematambudziko nekuda kwevanhu vazhinji kuwana maseva panguva imwe chete.
Nekuda kwekuti kurodha pasi kwesoftware kunogona kunonoka uye, kunyangwe kana uchikwanisa kuikanda, iyo yekumisikidza inogona kuita chando sezvo ichiedza kuongorora kubatwa kwako neApple.
Pakutanga kurodha pasi kwedu kweBig Sur kwakatyisidzira kutora zuva rese - chiratidzo chinoratidza kuti vanhu vazhinji vari kuyedza kuwana maseva.
Unogona kukanda kana paine nyaya nemaseva pakupera kwaApple nekushanyira Apple's server chinzvimbo chewebhu peji pano: System Status peji. Tarisa uone macOS Software Gadziriso chikamu kuti uone kana paine chero anozivikanwa nyaya. (Kana chinongedzo chisingashande chiri https://www.apple.com/uk/support/systemstatus/)
Sezvauchaona kubva pachiratidziro chakaburitswa pazasi paive nedambudziko neMacOS Software Gadziriso musi wa12 Mbudzi. Kubva zvagadziriswa maererano neApple.
Nepo nyaya neBig Sur yaive yekurarama musi wa12 Mbudzi Apple yaive nemavara anotevera pane saiti inoratidza kuti paive nedambudziko: "Vashandisi vanogona kusakwanisa kurodha pasi MacOS Software Updates paMac makomputa."
Gadzirisa: mhanyisa kurodha pasi
Haisi nguva dzose maSeva eApple ane mhosva kunyange. Zvichida nyaya yacho yave kumagumo ako. Zvichida kubatana kwako kweWiFi kwakashata. Tinokurudzira kuti iwe uedze kuswedera padhuze neiyo router.
Unogona kuona kuti zvinhu zvinokurumidza kana iwe ukatama kubva paWi-Fi uchienda kune yekubatanidza wired. Kana iwe uine tambo yeEthernet uye iyo inodiwa adapter kana Mac yako iine chete USB-C chiteshi, zvivharire iwe pachako munzvimbo. Kudhawunirodha kwako kuchakurumidza kukurumidza pamusoro pechisungo chine waya.
Read more: Maitiro ekugadzirisa matambudziko eWi-Fi paMac
Gadzirisa: Batidza Yemukati Caching
Chimwe chinhu chaunogona kuyedza kugadzirisa Zvemukati Caching.
Kana kurodha pasi kwakatyisidzira kutora nguva yakareba isu takatendeuka Zvemukati Caching.
Enda kuSystem Preferences> Kugovana.
Kuchinja Zvemukati Caching.
Kutangazve iyo Mac.
Sezviri pachena Zvemukati Caching zvinoderedza mashandisirwo emuchadenga uye zvinomhanyisa kumisikidza pamidziyo yakatsigirwa nekuchengetera zvigadzirwa zve software pakombuta.
Isu takave nechokwadi chekuti iyo Cache Saizi yaive isina muganho - tinya pane Sarudzo. Uye isu takave nechokwadi chekuti sarudzo yakasarudzwa padivi peCache yaive Zvemukati.
Neshanduko idzi munzvimbo kurodha pasi kwapera muhafu yeawa pane kuti maawa gumi atarisirwa pakutanga.
Dambudziko: macOS inogadziridza haizoregedze
Chimwe chikonzero iwe ungatadza kudhawunirodha macOS yekuvandudza ndeyekuti kana usina zvakakwana nzvimbo yemahara pane yako Mac.
Pamwe hapana nzvimbo yakakwana inowanika paMac yako (tinogara tichikurudzira kuti usaise kana uine isingasvike 20GB yenzvimbo yemahara sezvo Mac yako ingangonetseke nekumisikidza neimwe nzira - zvirinani neBig Sur inorema mukati ar pamusoro 12GB iwe unozoda yese nzvimbo iwe yaunogona kuwana!)
Iwe uchaona pazasi kuti kunyangwe 20GB nzvimbo haina kunyatso kukwana kana zvasvika pakuisa macOS Big Sur zvakadaro. Isu taitoda 35GB kuwanikwa kana zvasvika pakuita kuiswa. Saka izvo zvakanyanya 45GB inodiwa usati watanga - ungangoda kuverenga izvi: Usazvinetse nekuedza kugadzirisa kuBig Sur kana uine 128GB Mac.
Gadzirisa: Gadzira nzvimbo
Isu tinopa kuraira pakugadzira imwe nzvimbo pane yako Mac pano: Maitiro ekuburitsa nzvimbo pane Mac. Iwe unogona semuenzaniso kudzima ekare maemail uye mameseji mameseji, kana tsvaga yekare Time Machine backup mafaera kubva kuMac yako woadzima.
Imwe nzira huru yekusunungura nzvimbo ndeyekudzima iyo mifananidzo inosanganisirwa neMeseji iwe yawakagamuchira pane yako Mac. Iwe unogona kuita izvi nekudzvanya paApple Logo> About iyi Mac> Manage uyezve kusarudza mameseji uye kubvisa mifananidzo yakawanda nemavhidhiyo sezvaunogona.
Iwe unogona zvakare kuyedza chirongwa chakadai seKuchenesa Mac yako kudzima macache uye zvimwe zvinhu kubva kuMac yako. Kana iwe usingade kubhadhara tinomhanya kuburikidza Maitiro ekudzima imwe chengetedzo paMac.
Imwe nzira yaungakwanise kutora macOS yekumisikidza kurodha pasi nekuisa ndeye kushandisa Safe Mode.
Gadzirisa: Dhawunirodha kubva kuMac App Store
Kana iwe uri paCatalina iwe unogona kufunga kuti unofanirwa kunamatira kurodha pasi software nyowani kuburikidza neSoftware Gadziriso, asi iwe unogona achiri kutora kurodha pasi kuburikidza neMac App Chitoro.
Dhawunirodha MacOS Big Sur pane iyo Mac App Store pano.
Patakaedza kudhawunirodha Catalina kubva kuMac App Store takatarisana neshoko iro iro rakakumbirwa vhezheni ye macOS yaisawanikwa zvakadaro.
Gadzirisa: Shandisa Safe Mode
Dhinda bhatani remagetsi uye bata pasi Shift kiyi kuti utange iyo Mac kumusoro mu Safe Mode. Vhura App Store uye gadziridza maapplication ako uri muSafe mode. Dzorera.
Tine a dzidzo pakushandisa Safe Mode pano. Kuti uwane Safe Mode pinda uye ubatise iyo Shift kiyi kana iwe uchitanga yako Mac. Mira apo logo yeApple ichioneka, uyezve, apo iro rewindo rekupinda rinowoneka kuburitsa iyo Shift kiyi.
Heino maitiro ekushandisa Safe Mode pane Mac.
Gadzirisa: Dhawunirodha software kubva pawebhusaiti yeApple
Kana iwe uine matambudziko kurodha pasi poindi yekuvandudza (kwete yakakwana vhezheni) kuburikidza neSoftware Kugadziridza kana Mac App Store, unogona kushandisa Apple's webhusaiti panzvimbo Unogona kuwana ichangoburwa macOS inogadziridza pano. Kuti uwane chero software yekuvandudza pane ino saiti, ingo tsvaga iyo.
Dambudziko: macOS haizoise zvikanganiso
Pamwe wakakwanisa kurodha pasi Big Sur kana chero imwe macOS yekuvandudza uye wozoona kuti yaisazomisikidza. Izvi zvakaitikawo kune vanhu vazhinji apo vaiyedza kurodha pasi Big Sur musi wa12 Mbudzi avo vakaona mhosho meseji inoratidza kuti 'Kuisirwa kwakundikana: kukanganisa kwakaitika panguva yekuisa iyo yekuvandudza', isu tichamhanya kuburikidza nemuenzaniso iwoyo tisati tarisa mimwe meseji yekukanganisa yatinayo. yakaonekwa munguva yakapfuura.
Error: Kuisa kwakundikana kukanganisa kwakaitika apo uchiisa iyo yekuvandudza
Kana iwe ukaona iyo yekukanganisa meseji: 'Kuisirwa kwakundikana: kukanganisa kwakaitika uchiisa iyo yekuvandudza' iwe wanga usiri wega. Paive nemishumo yakawanda yevanhu vane matambudziko ekurodha Big Sur.
Isu takawana iri dambudziko chairo nekuyedza kwedu kurodha pasi uye nekuisa Big Sur. Tichagovana zvakaitika kana zvikabatsira kwauri:
Chekutanga chiziviso chekuti chimwe chinhu chaienda chakange chiri kana zvaitaridzika senge kurodha pasi kweMacOS Big Sur kwainge kwapera - iine yakazara 12.2GB yakadhonzwa - asi bhawa rakanamatira neimwe nhanho yekuenda, takaisiya yega kweawa kana zvakadaro netariro yekuti yaizozvigadzirisa pachayo.
Zvisinei, patakadzoka takaona meseji inoti: “Kuisa kwakundikana. Pane kukanganisa kwaitika pakuisa gadziriso yacho ”.
Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti kunyangwe hazvo yakanga yaratidza kare kuti iro rese Big Sur faira rakanga ratorwa pasi, pakanga pasina pekuonekwa paMac yedu.
Isu takaedza kutanga kurodha pasi zvakare ndikaona mumwe meseji, panguva ino ichiratidza kuti iyo faira haigone kutorwa pasi.
Zvinotaridza kuti Mac edu aiziva kuti mafaera eBur Sur aive paMac yedu achivhurika patakatsvaga zvakare iro iro Big Sur faira raivepo. Iwe unogona kutsvaga Big Sur uchishandisa Spotlight uye edza kuiisa - kana iwe unogona kudzima mafaera wotanga futi. (Kunze kwekunge iwe uchizoona kana iwe uchiramba uchiverenga, izvo hazvina kutibatsira zvakanyanya).
Kanganiso: Iko hakuna kukwana zvakakwana nzvimbo yemahara pane yakasarudzwa vhoriyamu kukwidziridza iyo OS
Kuve nekuwana iyo Isa Big Sur mafaera isu takafunga kuti isu tave kuzokwanisa kuiisa, kunze kwekuti patakaedza isu takatarisana nechikumbiro che14GB nzvimbo. Zvinoitika kuti Big Sur ndeye 12.2GB kurodha pasi, asi kunyangwe mushure meizvozvo iwe unoda nezve 34GB yemahara nzvimbo! Tichifunga kuti Apple yakangomira kutengesa maMac ane 128GB SSDs isu tinofungidzira vanhu vazhinji vari muchikepe chimwe chete nesu izvozvi. Isu takakwanisa kukwenya kudzokera ku25.5GB yenzvimbo yemahara asi tinofanirwa kutsvaga imwe 10GB.
Kana sesu urikutarisa kune Imwe chengetedzo paMac yako uye uchishamisika kuti gehena iri kutora yakadii nzvimbo, tarisa Maitiro ekudzima imwe chengetedzo pane yako Mac.
Neimwe nzira, kuita a kuchenesa kuisa kweBig Sur inogona kunge iri imwe nzira yekuwana nzvimbo yakakwana yekumisikidza. (Asi panguva iyoyo yaive yapfuura 11pm muUK saka takasiya!)
Mukupedzisira takazvishongedza neKuchenesa My Mac kudzima mafaera akachengetedzwa uye imwe data isina basa, ndokuzo blitzer mifananidzo nemavhidhiyo ane hukama neMessage yedu. Mukupedzisira takakwanisa kuwana iyo 10GB yataida, asi dai kumhanya Big Sur kwanga kusiri kukosha kwatiri tingadai takasiya kare kare!
Gadzirisa: "Iyo yekuvandudza package yakabviswa" kukanganisa
Tichiri kuyedza kurodha Catalina zuva rapfuura kuvhurwa takaona mhosho meseji inoratidza kuti: "Iyo yekuvandudza package yakabviswa kubvira payakatorwa kubva kuApple Software Gadziridza server".
Pakutanga isu takafungidzira kuti izvi zvaireva kuti Apple yainge yabvisa software, asi pakuferefeta zvakaratidza kuti zvine chekuita nenyaya yaive neyedu network.
Zvinotaridza kuti yaive nyaya yekuti paine akawanda madhizaini eApple padandemutande redu zvichikonzera kukwikwidza kwakanyanya kwebandwidth. Takamira kutepfenyura redhiyo, kudzima mamwe majaira, uye kufambisa Mac yangu padhuze neiyo router. Dai takaita ethernet tambo batsira tingadai takashandisa izvozvo. Chero nzira, yakagadzirisa dambudziko kwatiri panguva iyoyo.
Zvimwe zvinogadziriswa zveMacOS download matambudziko
Heano mamwe eanobatsira mazano ekuti ushande kuburikidza nekugadzirisa dambudziko nekutora macOS.
1. Tarisa Mac yako ine hutano
Zvinogara zvine hungwaru kumhanya kuburikidza neyakajairwa akateedzana cheki usati waita yekushandisa sisitimu yekugadzirisa pane Mac. Isu tinofukidza matanho ekugadzirira muchikamu chekutanga chemutungamiri wedu chinoratidza Maitiro ekuvandudza macOS pane Mac.
2.Kanzura kurodha pasi / kumisa iyo yekuvandudza
Iwe unogona kukwanisa kukanzura kurodha pasi, asi nzira yacho inoenderana neshanduro yei macOS yawakaisa.
MuMojave Apple yakashandura nzira vashandisi vatore kurodha pasi macOS Software Zvidzoreso. Ivo zvino vanowanikwa kuburikidza neSystem Preferences> Software Kwidziridzo, kwaimbove kwakadzingwa kuburikidza neMac App Store.
Kana iwe uchida kumisa kurodha pasi, unogona kudzvanya pa x inoratidzika padhuze nebhawa inoratidza kufambira mberi kwekurodha pasi, sezvakaratidzwa mupikicha pazasi.
Pre-Mojave, unogona kukwanisa kugadzirisa zvakadzama nekuenda kuMac App Store, kutsvaga software yauri kurodha pasi, nekudzvanya Option / Alt. Paunoita kudaro iwe unofanirwa kuona sarudzo yekuKanzura kurodha pasi.
Mushure mekukanzura kurodha pasi iwe unokwanisa kuzotanga zvekare, netariro pasina kana matambudziko panguva ino.
Dambudziko: Yakamiswa macOS kugadzirisa
Kazhinji, kana paine dambudziko nekuisa kwako software inozonamira pane yekuvandudza skrini, inoratidza Apple logo ine chinzvimbo bar inoratidza mafambiro ari kuita software. Panogona kunge paine izvo zvinotaurwa nevanhu se'inosvetuka bhora bhora '.
Neimwe nzira, iwe unogona kuona chena, grey kana nhema nhema. PaMacs mazhinji iyo skrini inogona kunge yakasviba zvekuti ungatotadza kutaura kana iyo Mac yakavhurwa.
Nekudaro, iwe unoda kuve nechokwadi chechokwadi chekuti kuisirwa hakusati kuchimhanya kumashure nekuti kumanikidza kudzoreredza Mac panguva yekumisikidza kunokanganisa maitiro ekumisikidza uye zvinogona kukukonzera kurasikirwa nedata. Ndicho chimwe chikonzero nei zvichikurudzirwa kuti iwe dzorera Mac yako usati waisa software nyowani.
Neimwe nzira, iwe unogona kuona kuti Mac yako inonamira mune inoisa ine meseji iyo "macOS haigone kuiswa pakombuta yako". Patakadzvanya Kutangazve zvimwechetezvo zvakaitika, pakupedzisira, nzira chete yataikwanisa kuigadzirisa yaive kutanga muSafe Mode nekudzora iyo yekuisazve. Tsvaga chaizvo zvatakaita pazasi.
Kana Mac yako ichiita kunge yakaomeswa nechando panguva yekumisikidza, zvakakodzera kuteerera kuMac yako kune zviratidzo zvehupenyu - unogona kukwanisa kunzwa whiring - uye nekutevera iri pazasi zano.
1. Tsvaga kana Mac yako yakanyatsooma
Usati wapedzisa kuti Mac yako yaoma nechando panguva yekumisikidzwa, unofanirwa kuziva zvinotevera.
Dzimwe nguva kuvandudza software paMac kunogona kutora Zvakanyanya. Yakareba. Nguva. Unogona kusangana nezvinoratidzika senge chando chakagadziriswa, asi kana ukachisiya kwemaawa mashoma chinogona kuzosvika kumagumo kwebasa racho. Dzimwe nguva zvakakosha kusiya Mac husiku hwese kuti upedze basa ratangwa. Dzimwe nguva zvigadziriso zvinogona kutora maawa gumi nematanhatu kana kudarika - kunyanya pamazuva apo Apple inoburitsa vhezheni nyowani yeMac inoshanda sisitimu.
Rangarira, iyo yekufambira mberi bhaa iwe yaunoona panguva yekumisikidza ingori yakanyanya fungidzira kuti inguvai ichatora. Mune ruzivo rwedu miniti imwe inotiudza kuti kuchave nekumirira kwemaawa maviri, ipapo maminitsi makumi mashanu, ipapo awa, usati wasvetuka pasi kusvika pamaminitsi makumi maviri. Dzimwe nguva zvinhu zvinononoka nekuti iyo Mac iri kutora chinguva kuisa imwe faira kuseri kwezviitiko uye iyo inokanda iyo yese yekuvandudza nguva kufanotaura kunze kwehwindo.
Iyo Mac inogona kunge yakanamatira pamaminetsi makumi maviri asara kwemaawa maviri apfuura, asi izvi hazvireve kuti haina kubatikana kuyedza kuisa software.
Tarisa paRog kuti uone kana Mac yako ichiri kuisa macOS
Dhinda Command + L. Izvi zvinounza rwakawedzerwa ruzivo uye zvimwe zvakawanda nezve huwandu hwenguva yasara yekuisa. Iyo inogona kukupa iwe iratidziro iri nani yemafaira api ari kuiswa uye huwandu hwenguva yasara.
Kana zvikazoitika kuti kumisikidza hakuna kumiswa iva nemoyo murefu uye mirira mamwe maawa mashoma.
Chinhu chakakosha kuyeuka: Apple inoratidza kuti inguvai nguva yasara yekumisikidzwa… Usabhadhara izvi chero nekuti HAZVIMBO RUDO!
Dambudziko: Mac inotonhora panguva yekumisikidza
Kana iwe uine chokwadi chekuti Mac haisati ichishanda mukugadzirisa software yako wobva wamhanya nematanho anotevera:
1. Nyarara pasi, mirira masekondi mashoma, wobva watangazve yako Mac
Dhinda uye ubatisise bhatani remagetsi kuti uvhare uye wotangisa Mac yako kumusoro.
2. Enda kuSystem Preferences> Software Kwidziridzo
Kana, kana iwe uri pane yakura macOS verison, enda kuMac App Store uye vhura Zvidzoreso.
Iwe unofanirwa kuona kuti iyo yekuvandudza / yekumisikidza maitiro inoenderera kubva kwayakasiya.
3. Tarisa Log screen kuti uone kana mafaera ari kuiswa
Kana yekufambira mberi bhaa ichionekwa, pinda Command + L zvakare kuti utarise iyo Log skrini uye uone kuti mafaera ari kuiswa. Kana iyo Log skrini inoratidza kuti hapana chiri kuitika enda kunhanho inotevera.
4. Edza kuisa iyo Combo kugadzirisa
Sezvatakambotaura kare, Apple inoshandisa software pane webhusaiti yayo, saka unogona kurodhaunirodha kubva ipapo kana uchinge uine matambudziko nenzira yakajairika.
Pane chikonzero chakanaka chekutora software yako kubva pawebhusaiti yeApple kana uri kusangana nematambudziko: iyo vhezheni yesoftware inowanikwa kubva kuSoftware Yekuvandudza kana iyo Mac App Store inongosanganisira chete mafaera anodikanwa ekugadzirisa yako Mac.
Kana iwe ukaenda kune webhusaiti yekutsigira yeApple unogona kuwana iyo Combo yekuvandudza iyo inosanganisira ese mafaera anodikanwa kugadzirisa macOS. Iyi vhezheni yeiyo yekutsiva ichatsiva ese mafaera sisitimu uye nekudaro ive nechokwadi chekuvandudzwa kwapera.
5. Dzorerazve iyo NVRAM
Kana Safe Mode isingashande, tangazve Mac uye ubatise Command, Option / Alt, P uye R. Izvi zvichagadzirisa NVRAM. Mirira kusvikira komputa yadzoka uye mirira kuti uone kana ichitanga kugadzirisa.
Kuti uwane rumwe ruzivo verenga Maitiro ekusetazve iyo PRAM / NVRAM pano.
6. Shandisa Recovery Mode kudzoreredza macOS
Sesarudzo yekupedzisira iwe unogona kutangazve iyo Mac muKudzorera Mode (bata pasi Command + R pakutanga). Pane dzinoverengeka sarudzo dzaungasarudze kubva apa - unogona kudzoreredza Mac yako kubva kune yako yekupedzisira Time Machine backup, kana kuita dhisiki kugadzirisa - asi isu tinokurudzira kusarudza iyo 'Isa nyowani OS' sarudzo. Tine dzidziso yakaparadzana pa maitiro ekudzosera MacOS uchishandisa Kudzoreredza Mode.
Kana ichidzosera macOS yako Mac inotsiva mafaera ese eApple kunyora chero matambudziko anogona kunge achikonzera kukanganisa uku - netariro. Iyi yekuvandudza haizosanganise yazvino vhezheni yesoftware saka mushure mekuita iyo yekuvandudza, tarisa Software Kugadziridza uye shandisa yazvino macOS yekuvandudza.
7. Isa iyo OS kubva kune yekunze dhiraivha
Kana iwe uchine nyaya neiyo yekuisa iwe unogona kuyedza kuisa iyo OS kubva kune yekunze dhiraivha. Verenga iyi dzidziso kuti uwane maitiro ekugadzira bootable installer uye kuisa macOS kubva kune yekunze dhiraivha.
8. Mhanya Disk Magetsi kana iwe uchinge wagadzirisa
Paunopedzisira wamutsa software uye unomhanya tinokukurudzira kuti umhanye Disk Utility kugadzirisa chero nyaya dzinogona kunge dzakakonzera dambudziko pakutanga.
Zvaunofanira kuita kana macOS isingakwanise kuiswa pakombuta yako
Patakatanga Mac yedu ndikaona iwo mameseji macOS aisagona kuiswa pane komputa yako isu pakutanga takanga tavhiringidzika - sekufunga kwedu isu tanga tisiri kuyedza kuisa macOS. Asi, zvisinei, isu takanga takanamatira mune chiuno. Patakadzvanya Kutangazve Mac yedu kutangazve, asi yaive ichakamira mune yekumisikidza.
Takaedza kurega kuisa - takadzvanya paI Installer hwindo uyezve kubva kumenu iri pamusoro sarudza Kurega MacOS Installer (neimwe nzira Raira + Q). Zvinosuruvarisa kwatiri isu patakatora Mac yedu zvakare takave nedambudziko rakafanana nekuvhura iyo inosimudza.
Isu takazomhanya kuburikidza nesarudzo dzinotevera uye takave nekubudirira kwakawanda:
Kutanga muSafe Mode: Isu takabata pasi yekuchinja kiyi isu tichitanga kukwira Mac yedu. Nenzira iyi takakwanisa kubhuroka mu Safe Mode. Mune Safe Mode iwe unowana iyo Mac iri zvishoma glitchy asi iwe unofanirwa kugona kuita izvo zvaunofanirwa kuita kugadzirisa dambudziko.
Pane imwe nguva muSafe Mode takavhura Mac App Store ndokutsvaga Big Sur. Mune shanduro dzekupedzisira dzeMacOS iwe unofanirwa kukwanisa kuwana iyo yekuvandudza muSystem Preferences Software Gadziriso.
Isu takadzvanya kurodha pasi uye takamirira apo iyo Big Sur inosimudza kurodha pasi kumashure.
Kamwe iyo yekumisikidza payakadzvanywa uye isu tanga takagadzirira kuisa takaenderera mberi nekumisikidza.
Izvo zvakare zvinogona kuti macOS haigone kuiswa pane yako Mac nekuti yako Mac yakura zvakanyanya: iwe unoona ayo maMac anogona kumhanyisa Big Sur pano.